Wixii aan ka bartay CloudCamp | Martech Zone
Khamiista, Febraayo 5, 2009 Axad, Oktoobar 4, 2015 Douglas Karr
In kasta oo dib loo dhigay (1 toddobaad) baraf dartiis usbuucii la soo dhaafay, CloudCamp Indianapolis ayaa baxay iyadoo aan wax dhibaato ah la helin caawa. Hadaad tahay ma ka yimid Indianapolis - waa inaad sii wadataa akhriska. CloudCamp waa mid cusub oo lagu qabtay magaalooyinka waaweyn ee adduunka oo dhan. Waad ku mahadsantahay khibrada maadada iyo hogaaminta warshadaha BlueLock, waxaan ku qabanay munaasabad guuleysatay isla halkan Indy.
Hadaad yaabeyso Cloud Computing waa maxay, Bluelock waxay bixisay xoogaa dood ah oo ku saabsan qeexitaanka ereygan hal abuurka leh.
Xisaabinta Daruuraha ee Indianapolis?
Indianapolis waxay heleysaa feejignaan qaran ahaan iyo caalami ahaanba sababtoo ah kharashyada hooseeya, xasilloon ee la xiriira awoodda iyo dhismaha - laba arrimood oo waaweyn oo go'aaminaya kharashyada martigelinta. Intaa waxaa dheer, cimiladeennu waa mid adag oo waxaannu nahay isgoys ka soo horjeedda laf-dhabarka waaweyn ee internetka Waqooyiga Ameerika. Haddii aad martigelinayso dalabkaaga bakhaarka xogta California hadda - waxaa laga yaabaa inaad rabto inaad fiiriso!
BlueLock waa Hogaamiye Caalami ah oo ku saabsan Computing Cloud
Waa inaan daacad ahaado, inbadan oo aan maqlo Pat O'Day oo hadlaya, inbadan oo cabsi ah oo ku saabsan inta ninkaa uu ka ogyahay xisaabinta daruuraha, xisaabinta utility, xisaabinta shabakada, maaraynta bakhaarka xogta, Virtualization, VMWare… adigu magacow ninkaasna wuu ogyahay waa Isagu waa hadal jilicsan yahay, oo naxariis badan, oo wuxuu awood u leeyahay inuu si aan caadi ahayn ula hadlo dadkeenna oo aan tiknoolajiyad u lahayn warshadahaas!
Kama dhimaayo dadka kale kooxda! John Qualls iyo Brian Wolff waa saaxiibo aad u fiican laakiin caawa Pat ayaa isha lagu hayey.
Kala Bax Kalfadhiyada: Miisaaniyadda App
Mid kamid ah fadhiyada aan kaqeyb galay waxaa hogaaminayay Ed Saipetch. Ed wuxuu ka shaqeeyay The Indianapolis Star markii aan sameeyay oo aan wax badan ka dhistay isku dheelitirka iyo codsiyada wargeyska. Wuxuu dib ula soo baxay xoogaa sixir ah markaa - wuxuu haystay ilo yar iyo baahiyo badan oo uu ku dhisayay codsiyada meheradaha ee miisaaniyada khafiifka ah.
Ed wuxuu la wadaagay tan ku saabsan aaladaha cusub ee loo adeegsan karo baaritaanka xamuulka otomaatiga ah iyo baaritaanka xawaaraha dalabka iyo sidoo kale dood caafimaad qabta dhismaha iyo waxa loola jeedo koritaanka tooska ah iyo kor u kaca. Aad ayaan uga helay sheekada.
Sharding runtii waa erey farsamo?
[Geli Beavis iyo Butthead qosol]
Xitaa waan ka wada hadalnay shaadhka, waa eray aan kaliya u qoslay kaftanka musqusha oo aan filim ku arkay hal mar. Xaraashka runti waa hab lagu kobciyo dalabkaaga, halkii si waxashnimo ah, iyadoo si fudud loo abuurayo nuqullo cusub oo xog ururin ah isla markaana macaamiisha loogu riixayo keydadyo kala duwan si loo yareeyo xanuunka ku dhaca garaacista hal xog-ururin mar walba.
Kala Bax Kalfadhiga: Cloud ROI
Kharashaadka laxiriira xisaabinta daruurku way kala duwanaan karaan - si aan waxba u jirin nidaamyada si heer sare ah loola socdo oo si adag loo hubiyo. Dhadhanka BlueLock waa Kaabe ahaan Adeeg ahaan - halkaas oo aad asal ahaan uga bixi karto dhammaan madax-xanuunka Kaabayaasha kooxdooda si aad ugu nuuxnuuxsato geynta iyo koritaanka!
Waxaan galay sheekada Soo Noqoshada Maalgashiga anigoo ka fikiraya inaan cashar aad uxun u yeelan doono falanqaynta Kheyraadka lagama maarmaanka u ah martigelinta dhaqanka iyo kan caadiga ah. Halkii, Gowraca Robby waxay horseedday dood aad ufiican oo ku saabsan faa'iidooyinka iyo qasaaraha labadaba waxayna kahadleen yareynta halista.
Khatartu waa tiro shirkadaha badankood ay lambarro ku dhejin karaan… imisaad ku kacaysaa haddii aadan isla markiiba kori karin? Immisa ayey ku kacaysaa haddii aad hoos u dhacdo oo aad u baahato inaad dib u soo celiso jawi la soo celiyey? Kharashaadkan, ama dakhligii lumay, ayaa hadheyn kara nikkeliyada iyo xilliyada lagu falanqeeyay isbarbardhiga dhaqameed.
Mahad gaar ah BlueLock xaflad si heer sare ah loo soo agaasimay (loogu talagalay). Waan sugi kari waayey inaan guriga imaado oo aan wax ka qoro waxyaabaha ku saabsan burburka.
Tags: daruurdaruur Kombuyuutaradadaruuraha
Febraayo 5, 2009 saacadu markay tahay 10: 31 AM
Xitaa waxaan ka wada hadalnay sharding, oo ah eray aan kaliya ugu talo galay kaftanka musqusha oo aan hal filim ku arkay hal mar. ”
Aad baan u qoslay, xoogaa waan yara fiiqay.
Mar labaad, [Geli Beavis iyo Butthead qosol]
Febraayo 5, 2009 saacadu markay tahay 10: 47 AM
Waad ku mahadsantahay fiilada, Doug! Cloudcamp waxay ahayd dhacdo weyn.
Kuma aan dhex hadlin Ed ee ku saabsan sharding, laakiin waxaan u maleynayay inaan cadeeyo in qaabkani daruuri uusan aheyn "waxashnimo". Badanaa, kala-goynta ayaa loola jeedaa kala-jabinta macluumaadkaaga iyada oo la raacayo khadadka khaaska ah ee khaaska ah. Tusaale ahaan, haddii xogta hal macaamil aysan waligood saameyn ku yeelan xogta macmiil kale, waxaad u kala qeybin kartaa keydkaaga weyn xogta laba qaybood: AL iyo MZ.
Ku keydinta ragga (sida Ed) tani waa nooc xalin ceyriin ah, maxaa yeelay waxay ka dhigan tahay waa inaad ilaalisaa keydadyo badan oo xog ah oo si isku mid ah u qaabeysan. Laakiin waa hab fiican oo lagu kordhiyo waxqabadka iyada oo aan lagu darin kharash badan!
Feb 5, 2009 markay ahayd 7:47 PM
Ceyriin ayaa noqon kara erey ka fiican, Robby. Sharaxaad weyn - waa xalka la heli karo, xoogaa xoog xoog liita ah.
Febraayo 6, 2009 saacadu markay tahay 11: 36 AM
"Xoog caayaan" waa sax. Laakiin waad ogtahay oraahdii hore: "Haddii xoog karti uusan shaqeyn, waxaa laga yaabaa inaadan isticmaalin ku filan!"